Global Voices teny Malagasy · 11 Oktobra 2018
Tantara tamin'ny 11 Oktobra 2018
Bangladesh11 Oktobra 2018
Taorian'ireo sorona sy ady marobe, ny 29 desambra 2008, nanana fotoana naha-mety azy ireo olom-pirenena tao Bangladesh, tsy nisy tahotra na olana, nampihatra ny zony handatsa-bato sy hifidy an'ireo kandidà araka ny safidiny... Araka ireo fikambanana nasionaly sy iraisam-pirenena marobe, sahala amin'ireo olom-pirenena amin'ny ankapobeny, heverina ho nalalaka sy tsy...
Shina11 Oktobra 2018
Iharan'ny ririnina mamirifiry ankehitriny ireo niharam-boina vokatry ny horohorontany tamin'ny 12 may 2008 tao Sichuan. Manam-pahefana iray eo an-toerana no milaza fa mety hahatratra -21°C ny maripàna farany ambany ao amin'ilay faritra tratry ny horohorontany. Ankehitriny , ny fanampiana an'ireo traboina hamakivaky ny ririnina henjana no mijanona ho asa iray...
Kazakhstan11 Oktobra 2018
Tato ho ato, nitrangàna zavatra maro mahalasa saina tany amin'ireo banky kazakh sy ny vidin'ny petrabola kazakh. Nampirodana ny sandan'ny petrabolan'ny banky telo ny famoahana vaovao mampiady hevitra sy tsy nisy fotony, ary niteraka ny fandraisana ho fananam-panjakana ireo banky roa lehibe tsy miankina.
Angola11 Oktobra 2018
Azia Atsinanana11 Oktobra 2018
Tamin'ity volana ity, dia tototra vaovao momba an'i Charles Kao, nandrobaka ny loka Nobel momba ny Fizika ny gazety Shinoa sy ny sehatra fiadian-kevitra antserasera. Saingy mpahay siansa Shinoa hafa any ampitan-dranomasina no nahazo ity loka malaza ity, nivadika ho fanontaniana lalindalina kokoa ity fotoana vetivety nizarana voninahitra ity: Rahoviana i...